Waxqabadka Dowladda ee Usbuucii la soo dhaafay – Radio Muqdisho
Mogadishu, 11 April 2015 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Dowladda oo dhiirigelineys Waxbarashada Lacag la’aanta ah, Golaha Wasiirada oo ansixiyey Istraatejiyada La Dagaalanka Argagaxisada, Dowladda oo lacag dul dhigtay Horjoogayaasha Al-Shabaab, Xarumaha Maxkamadaha iyo Xabsiyada oo la dhisayo, Dowladda oo wada wadatashi Kheyraadka Dabiiciga ee Dalka, Horumarinta Warbaahinta Dalka, Turkiga oo tababaraya Ciidanka Soomaaliyeed, Dhaqanka Soomaaliyeed oo la xoojinayo, Xarunta Gaarisa ee C/Casiis oo xariga laga jaray, Dhalinyarada oo Shaqo abuur loo sameeyey, Xukun Dil ah oo lagu ridey Al-Shabaab, Xeer Ilaaliyeyaal kor loo qaaday aqoontooda, Wakaalada SONNA oo la howlgeliyey, Shirkii dib u heshiisiinta Dhusamareeb oo la soo gabogabeeyey, Iskuulka Dr Kadare oo xariga laga jaray, Jubbaland oo saxiixday Qorshaha Qaranka ee Soomaaliya iyo Isbitaal cusub oo laga hirgeliyey Muqdisho.
Dowladda oo dhiirigelineys Waxbarashada Lacag la’aanta ah
Drs Khadra Bashiir Cali Wasiirada Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ayaa 7dii April booqatay Iskuulada dowladda ee lacag la’aanta ah, gaar ahaan Iskuulka 11 Janaayo ee degmada Cabdicaziis ee Magaalada Muqdisho, waxeyna soo indha indheysay qaabka Waxbarashada ay u socoto iyadoo si toos ah su’aalo mid mid u weydiineysay Ardayda Fasalada ku jirtay qaar. Wasiirada ayaa si aad ah ugu faraxday qaabka Waxbarashada ay u socoto, waxeyna booqashadeeda ku dhiira galineysay Waxbarashada Bilaashka ah ee loo simanyahay. Wasiirada ayaa sheegtay in ay kor u qaadi doonaan tayada Iskuulada dowlada islamarkaana sanadkan laga qaadi doono dalka oo dhan Imtixaan Qaran. Drs Khadra Bashiir ayaa tiri “Waa ay inaga go’antahay soo nooleynta iyo xoojinta Iskuulada dowladda si canug waliba oo Soomaaliyeed uu u helo Waxbarsho lacag la’aan ah waayo Waxbarashada lacag la’aanta ah waa loo simanyahay oo malahan kala sareyn soo celinteedana dalka iyo dadka ayey faa’iido u tahay”.
Golaha Wasiirada oo ansixiyey Istraatejiyada La Dagaalanka Argagaxisada
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa 7dii April 2015 soo dhoweeyay Ansixinta ay Golaha Wasiirrada ee Istaraatiijiyadda cusub ee looga hortagayo khatarta argagixisada ay ku hayaan Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa muujiyey sida uu ugu kalsoon yahay istaraatiijiyaddan cusub oo uu sheegay in la ansixiyey xilli loo baahnaa. Istaraatiijiyaddan waa mid dhameystiran oo casri ah, taas oo ka dhalatey cilmi baaris ballaaran oo la sameeyay iyo qiimeyn aad u qoto dheer. Waa istaraatiijiyad lagu saleeyay Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ammaaney Ciidammada Qalabka Sida e Soomaaliya sida geesinimada leh ee ay mar walba ugu adeegayaan qarankooda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale xusey in istaraatijiyaddan cusub ee la dagaalanka argagixisada ay tahay mid qeyb ka ah siyaasadda dowladda ee ku wajahan xasilinta dalka iyo dib u dhiska qaranka.
Dowladda oo lacag dul dhigtay Horjoogayaasha Al-Shabaab
Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa 9kii April 2015 diiradda lagu saaray Amniga guud ee dalka, waxana ay Xukuumaddu madaxooda dul-dhigtay lacago hoggaanka ugu sareeyo Kooxda Al-shabaab. Golaha Wasiirada ayaa ka dooday liis ay ku qoran yihiin 11 horjooge oo ka tirsan Ururka Al-shabaab, waxana Golaha Wasiiradu ansixiyeen lacago lagu abaal marinayo cidii keenta macluumaad ku aadan halka ay ku sugan yihiin hogaamiyeyaasha sar sare ee ururka Al-shabaab. Ragga ay dowladda Soomaaliya lacagta ku raadinayso waxaa ku jira hogaamiyaha guud ee Al-shabaab Axmed Diiriye oo Shabaab dhexdooda looga yaqaan Abu Cubayda, kaas oo madaxiisa la dul dhigay $250,000. Sidoo kale waxaa abaalmarin lacageed oo gaaraysa $150,000 ilaa $100,000 qofkiiba la dul saaray madaxda kale ee Al-shabaab sida; Mahad Warsame Qalay (Mahad karate), Cali Maxamed Raage (Sh. Cali dheere), C/laahi Cabdi (Da’ud Suheyb), Maxamed Maxamuud Nuur (Suldan), Cali Maxamed Xuseen (Cali Jeesto), Xasan Maxamed Cali (Afgooye), C/laahi Cismaan (Ismaaciil), Maxamed Cabdi Muuse (Haabiil), Maxamed Maxamuud (Dul-yadeyn Kunno), Yaasiin Cismaan (Kilwa) waxaa abaalmarintan qaadan doona cid walba oo sheegta meesha ay joogaan raggan ama suuragalisa in gacanta lagu dhigo. Ujeedada ayaa ah sidii dalka loo nabadeyn lahaa oo argagaxisada looga dhex saari lahaa shacabka.
Xarumaha Maxkamadaha iyo Xabsiyada oo la dhisayo
Saraakiil ka socotay Wasaaradda Cadaaladda ee dalka Turkiga oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa 7dii April 2015 ay kulamo la qaateen Wasiirka Cadaaladda, Wasiir ku xigeenka, iyo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka. Ujeedada kulankan ayaa ahaa sidii loo dhaqangelin lahaa heshiis ay Wasaaradaha Cadaalada ee Turkiga iyo Soomaaliya ay horey bishii Febraayo ugu soo gaareen magaalada Ankara ee Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka saacideysa sidii xarumaha Maxkamadaha iyo Xabsiyada dib loogu dayactiri lahaaa si cadaalada Soomaaliya loo horumariyo. Wasiirka Cadaaladda Cabdulaahi Axmed Jamaac (Ilko-jiir) ayaa saraakiisha Turkiga warbixin kooban ka siiyey baahida xabsi ee ka jira dalka iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in loo helo xabsiyo iyo xarumo maxkamadeed oo si wanaagsan u shaqeeya. Dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka caawisa dhinacyo badan oo ay kamid tahay dib u dhiska dalka, waxbarashada iyo arimo kale, waxayna talaabadan lagu tayaynaayo hay’adaha garsoorka dalka ay tahay mid wax badan ka bedeli doonto muuqaalka guud ee Soomaaliya, gaar ahaan garsoorka iyo cadaalada oo ummada Soomaaliyeed ay aad ugu baahanyihiin inay helaan sinnaan iyo cadaalad.
Dowladda oo wada wadatashi Kheyraadka Dabiiciga ee Dalka
Wasaaradda Batroolka & Macdanta waxay go’aansatay inay bilowdo wada-hadal dhex mara dowladda Federaalka ah iyo maamul goboleedyada oo lagu baadi-goobayo xal waara oo gundhig u noqon kara dejinta iyo horumarinta siyaasado, xeerar iyo shuruuc lagu maareeyo kheyraadka shidaaalka, gaaska iyo macdanta kale ee dalka iyo wadaag baahsan oo dhaqaalaha ka soo baxaya ah. Sidaas daraadeed, wafdi Wasaaradda Batroolka & Macdanta ka socda ayaa socod hor-udhac ku soo kala bixiyey gobolo kala duwan. Wafdigaas waxa ay la kulmeen Hay’ada Shidaalka & Macdanta ee Puntland, Wasaaradda Batroolka, Macdanta, Biyaha iyo Degaanka ee Jubbaland, iyo Wasaaradda Batroolka & Biyaha ee Koonfur Galbeed. Wadatashiga ka dhexeysa Dowlada Federaalka iyo Maamul Goboleedyada ee ku wajahan horumarin heshiis wadaaga kheyraadka shidaalka iyo macdanta way soconaysaa inta laga gaarayo xal waara ee wadaagga dhaqalaha ka dhasha kheyraadka dabiiciga ah, lahaanshaha talada iyo la socoshadaba.
Horumarinta Warbaahinta Dalka
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) oo 7dii April 2015 la kulmay Safiirka UK Mr Neil Wigan ayaa labada mas’uul ay ka wada hadleen xiriirka labada dal, doorka UK ee Soomaaliya iyo sidii Warbaahinta dalka loo horumarin lahaa. Wasiir Maareeye ayaa uga mahadceliyey UK doorkooda hoggaamineed ee Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliya uga saacidaan dhanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey iyo caalamkaba. Wasiir Maareeye ayaa sidoo kale siiyey Safiirka UK warbixin ku aadan sida ay Dowladda Federaalka uga go’antahay dhaqangelinta hiigsiga 2016 iyo Qorshaha Wasaaradda Warfaafinta iyo horumarka ay gaartay oo la diyaariyey Istraatejiyada Warbaahinta Dalka, Xeerka Saxaafada oo baarlamaanka horyaala, dadaalka Wasaaradda ee dhanka isku xirka iyo xiriirka hay’adaha Dowladda iyo horumarka laga sameeyey dib u yagleelida SONNA iyo SNTV iyo horumarka guud ee Warbaahinta. Wasiirka ayaa ka codsaday UK inay kala shaqeyso sidii loo tayeyn lahaa Warbaahinta dalka oo dhan oo ay ku jiraan kuwa gaarka loo leeyahay iyo sidii loo horumarin lahaa dadaalada warbaahinta oo muhiim u ah hiigsiga 2016 sida wacyigelinta bulshada, afti u qaadida dastuurka, dhaqangelinta federaalka iyo dimoqraadiyeynta dalka. Safiirka UK ayaa ammaanay doorka wasaaradda iyo horumarka dalka uu sameynayo maalin walba sheegeyna in UK ay ka go’antahay sidii Soomaaliya loo gaarsiin lahaa nabad iyo barwaaqo.
Turkiga oo tababaraya Ciidanka Soomaaliyeed
Gaashaanle Sare Abdinuur Axmed Kadiye ayaa 7dii April 2015 booqdey Xeryo lagu tababarayo 103 Saraakiisha Ciidamada Xoogda Dalka Soomaaliyeed, Ciidamadan ayaa waxaa ay ku kala xareysanyihiin oo tababar uga socdaa xeryo dhowr ah oo ku kala yaala magaalooyinka Ankara, Istanbul, Ismiir iyo meelo kale oo ka tirsan wadanka Turkiga. Saraakiishan ayaa waxaa ay isugu jiraan Saraakiil sar sare iyo leyli saraal, iyo sarkaal xigeeno. Saraakiishan ayaa waxaa uu isugu jiraa tababarkooda dhoor nooc oo kala duwan, sida Duuliyeyaal, Duulista Hawada (Aviation), dhaqaatiir iyo Injineero. Tababarka Saraakiishan ayaa waxaa uu socon doonaa hal sano ilaa shan sano.
Dhaqanka Soomaaliyeed oo la xoojinayo
Xubno ka tirsan labada gole ee dowladda ayaa ka qeyb galay bandhig dhaqameed lagu xoojinayay horumarinta hidaha iyo dhaqanka oo 6dii April 2015 lagu qabtay Muqdisho. Hobollada Waaberi ayaa bandhigan uga qeyb qaatay ciyaaro hidaha iyo dhaqanka ah iyo sugaan, ayadoo ka qeyb galayaasha tartanka la guddoonsiiyey abaalmarino. Gudoomiyaha hay’ada wacyi galinta bulshada Maxamed Ibrahim Cajiib oo soo qabanqaabiyey munaasabada ayaa sheegay in xoojinta dhaqanka Soomaaliyeed ay muhiim u yihiin bulshada Soomaaliyeed, laguna dhiirigelinayo dhaqankooda. Guddoomiye ku Xigeenka Gobolka Banaadir, Iimaan Nuur Iikar ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo dhaqanka iyo ciyaaraha si loo tageero nabadda iyo in kulamada noocaan ah ay wax badan ku soo kordhinayaan bulshada. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo Wasiiru Dowlaha Maaliyadda Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ka mid ahaa masuuliyiintii ka qeyb galay bandhiggan, waxayna dhammaantood sheegeen in muhiimad weyn ay bulshada u leedahay. Wasiirka Wasaarada Warfaafinta, dhaqanka iyo Dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay waqti badan ku bixineyso adkeynta iyo soo nooleynta dhaqanka Soomaaliyeed, isagoo tilmaamay in dhaqanku uu ka mid yahay waxyaabaha lama taabtaanka ah ee ay leedahay umadda Soomaaliyeed.
Xarunta Gaarisa ee C/Casiis oo xariga laga jaray
Gudoomiyaha Gobolka Banadir Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” ayaa 6dii April 2015 xariga ka jaray xarunta waaxda Gaarisa ee Degmada C/casiis ee gobolka Banaadir oo dib u dayactir lagu sameeyay. Gudoomiyaha Degmada C/casiis Cismaan Muxiyadiin Cali Cariif ayaa u mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir iyo hay’adda DRC oo dhismaha xarunta hirgelisay. Gudoomiye Muungaab ayaa sheegay in howlaha lagu dayactiraayo xarumaha muhiimka ah ay sii socon doonaan isla markaana maamulka ay ka go’an tahay in ay dardargeliyaan howlaha ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed oo ku nool degmooyinka gobolka Banaadir. Xarumahan degmooyinka ayaa qeyb ka ah dib u dhiska hay’adaha dowladda si shacabka Soomaaliyeed loogu adeego. Dowladda Federaalka ayaa mudnaan gaar ah siisa sidii shacabka loogu adeegi lahaa oo ay hay’adihii dowliga u dhismi lahaayeen.
Dhalinyarada oo Shaqo abuur loo sameeyey
Dhalinyaro tiradoodu gaarayso 30 ayaa muddo hal sano ah ay baranayeen tababar ku saabsan xirfadda ganacsiga ayaa 6dii April 2015 la gudoonsiiyay lacago loogu talagalay in ay ku bilaabaan ganacsi, iyadoo fulinta tababarkan iska kaashaday Dowladda Federaalka, ururka Shaqaalaha Aduunka “ILO” iyo hay’adda dhanka ganacsiga ka shaqeysa oo lagu magacaabo MMC. Munaasbadda dhalinyaradan tababarka loogu soo xirayay ayaa waxaa ka qeybgalay Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaraha. Gudoomiyaha Hay’adda MMC Siid Cali Abuukar ayaa sheegay in 30ka dhalinyaro lagu soo xulay xirfadooda ganacsi iyo sida ay diyaarka ugu yihiin inay ganacsi cusub u abuuraan. Axmed Abuukar oo ka socday ILO ayaa balan qaaday in ay ILO ay Wasaaradda dhalinyarada ay ku garab taagan tahay sidii dhalinyarada Soomaaliya shaqo abuur loogu sameyn lahaa isla markaana dhalinyarada Soomaaliyeed loogu baahan yahay in ay wadankooda iimaansadaan halkii ay wadamada qurbaha ay u hanqaltaagi lahaayeen. Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Mudane Cismaan Dhuubow oo munaasabada soo xiray ayaa dhalinyarada ku booriyay in ay ka faa’ideystaan fursadan qaaliga ah oo ay heleen.
Xukun Dil ah oo lagu ridey Al-Shabaab
Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidanka Qalabka Sida ayaa 6dii April 2015 waxaa ay xukun dil ah ku riday labo eedeysane oo xafiiska Xeer ilaalinta ay ku soo eedeyeen in ay ka tirsanaayeen Koooxda nabad diidka ah ee UGUS isla markaana ay ka dambeeyeen dilal loo geystay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo shacabka. Labada eedeysane ayaa waxaa ay kala ahaayeen Shuceyb Ibraahim Mahdi oo 37 sano jir ah iyo Faarax Cali Cabdi oo 30 sano jir ah kuwaas oo ka tirsanaa Kooxda Nabad diidka ah ee UGUS. Labadan Danbiile ayaa dilay Xildhibaanadii hore ee Saado Cali Warsame, Maxamed Maxamuud Xayd iyo Aadan Maxamed Cali “ Sheekh Aadan Maddeer”, Axmed Odawaa Baale iyo Maxamed Axmed Maxamed “ Qaanuuni” oo ka tirsanaa hay’adda nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka. Gudoomiyaha Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida Gaashaanle Xasan Cali Shuute oo xukunka ku dhawaaqay ayaa sheegay in Maxkamadda ay ku xukuntay labadan nin dil toogasho ah. Dowladda Federaalka ayaa wada dadaaalada xasilinta dalka iyo sidii dambiilayaasha gacanta loogu soo dhigi lahaa oo cadaalada loo horkeeni lahaa si loo joojiyo dilalka macno darada ah ee ka dhaca dalka gudihiisa.
Xeer Ilaaliyeyaal kor loo qaaday aqoontooda
Wasiirka Cadaalada ayaa 6dii April 2015 tababar soconayey 6 bilood u soo xiray 17 Xeer ilaaliye. Waxaana munaasabada goob joog ahaa Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka, ku xigeenkiisa, Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaarada Cadaalada, gudoomiyaha Maxkamadda Racfaanka, gudoomiyaha Maxkamadda gobolka Banaadir, qaar kamid ah ururada bulshada rayidka ah. Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in umadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay cadaalad isla markaana xafiiska xeer ilaalinta ay si cadaalad ah ugu adeegaan shacabka Soomaaliyeed. Dr Axmed Cali Daahir ayaa codsaday in si deg deg ah loo soo dhiso Gudiga Adeega Garsoorka oo shaqo muhiim ah u haya dalka. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Dowladda Somaaliya C/laahi Axmed Jaamac “Ilkojiir” ayaa kula dardaaramay xeer ilaaliyeyaasha tababarka loo soo xirey in wixii ay barteen si cadaalad ah ugu adeegaan dadka Soomaaliyeed oo u ooman cadaalad. Wasiirka ayaa sheegay in Wasaaradu ay xooga saari doonto sidii loo heli lahaa dad aqoon iyo khibarad u leh arimaha cadaalada oo tababaro siiya dhalinyarada cusub.
Wakaalada SONNA oo la howlgeliyey
Munaasabada loogu dabaal dagayay 4 sano guurada ka soo wareegatay markii dib loo howlgaliyay TV ga Qaranka Soomaaliyeed ayaa waxaa 4tii April 2015 lagu qabtay Xarunta Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska waxaana ka qayb galay Wasiiro, Xildhibaano, Culimo, Haweenka Qaranka, shaqaalaha wasaarada iyo marti sharaf kale. Munaasbada ayaa waxaa intii ay socotay ay hobolada Qaranka waabari ay ku soo bandhigeen heeso iyo majaajilo ay ka qayb qaadanayeen farxada xuska dib u howl galinta TV Ga Qaranka sidoo kale qaar ka mid ah howlwadeenada TVga ayaa waxaa ay iyana soo bandhigeeen riwaayad qiimo badan oo ay ku muujinayeen halgankii loo soo maray in warbaahinta qaranka la soo gaarsiiyo heerka ay maanta joogto iyo sida ay uga faa’iideesteeen bulshada Soomaaliyeed. Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye Wasiirka Wasaarada Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska, oo soo xiray Xaflada ayaa waxaa uu ka hadlay qorshayaasha horyaala Wasaaradda isagoo xusay in dib Wasaaradu u howlgalineyso Xarumo muhiim ah oo ay ka mid yihiin Tiyaatarka Qaranka, Madbacada Qaranka iyo kuwa kale. Dhinaca kale Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa si rasmi ah u furay Wakaalada Wararka Soomaaliyeed ee SONNA taas oo ah wakaalad facweyn oo noqon doonto wakaalad laga qaato Wararka Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed isla markaana wax ku baahin doonta Luqadaha Soomaaliga, Carabiga iyo English-ka.
Shirkii dib u heshiisiinta Dhusamareeb oo la soo gabogabeeyey
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa 8dii April 2015 wuxuu si rasmi ah u soo gunaanaday shirkii dib u hesiinta ee bulshada Gobollada Dhexe oo in mudda ahba ka socday xarunta Gobolka Galguduud ee Dhuusamareeb. Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in caasimadda Dowladda Gobollada Dhexe ay noqon doonto magaalada Dhuusmamareeb, shirka lagu unkayo Dowladda Gobollada Mudug iyo Galgduudna uu ka furmi doono magaalada Cadaado 11-ka bishan April. Madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in dib u heshiinta iyo isqaddarinta beelaha degaanku ay tahay howl u baahan in la joogteeyo oo la sii horumariyo.
Iskuulka Dr Kadare oo xariga laga jaray
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa 8dii April 2015 xariga ka jaray Dugsiga Hoose Dhexe ee Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare, kaasoo laga hirgeliyay degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho. Iskuulkan Hoose dhexe ayaa waxaa loogu magac daray Allaha u naxariistee Dr Xuseen Sheekh Axmed Kadare, waxaana dhismahiisa iska kaashaday Hay’adda DRC iyo bulshada degmada C/casiis ku nool. Mudane Muungaab ayaa sheegay in Iskuulkan loogu magac daray nin Halyey ahaa oo baal dahab ah ka galay Taariikhda Soomaaliya, isla markaana ay ka faa’iideysan doonaan bulshada degmada C/casiis ku nool. Ugu dambeyn Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay Iskuulkan uu yahay mid lacag la’aan ah, isla markaana macalimiinta wax ka dhigaya mushaarkooda uu bixin doono Maamuka Gobolka.
Jubbaland oo saxiixday Qorshaha Qaranka ee Soomaaliya
Wasiirka Qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa 8dii April 2015 gaarey magaalada Kismaayo. Wasiirka ayaa kulan la qaatay Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe). Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta & Iskaashiga Caalamiga ee Dowladda Federaalka iyo Wasiirka Qorsheynta Jubaland ayaa waxaa ay kala saxiixdeen heshiis sadax qodob ka kooban oo qeexaya wada shaqeyn wanaagsan oo dhexmarta labada dhinac. Wasaarada Qorsheynta ee Dowladda Federaalka ayaa waday dadaalo Qorshaha Qaranka loogala tashanayo maamulada dalka ka jira isla markaasna heshiisyo la saxiixanayey maamuladaas si Qorshaha Qaranka ee Dowladda Federaalka ay u sahlanaato dhaqangelintiisa. Dowladda Federaalka ayaa in muddo ahba waday dadaalada in maamulka Dowladda Federaalka la gaarsiiyo dhammaan dalka oo dhan, isla markaasna shacabka deegaanada laga qeybgaliyo wadatashiyada muhiimka u ah Qaranka Soomaaliyeed.
Isbitaal cusub oo laga hirgeliyey Muqdisho
Isbitaal weyn oo qaabilsan xanuunada Indhaha ayaa laga hirgeliyey degmada Warta Nabadda ee caasimada Muqdisho. Hay’adda Islamic Relief ayaa dhistay Isbitaalkaan, waxaana loogu magic daray Boqortooyada Bahreyn oo maalgelisey Isbitaalkan. Wasiirka Caafimaadka iyo Wasiirka Qorsheynta & Iskaashiga Caalamiga ah iyo wasiir ku xigeenka Caafimaadka ayaana goob joog ahaa xafladii furitaanka Isbitaalka, isla markaasna kormeer ku sameeyey dhammaan qeybaha kala duwan ee Isbitaalka. Madaxa Hay’adda Islamic Relief, Maxamed Aslam ayaa waxuu furayaasha isbitaalka ku wareeejiyay Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada Warta nabada Yaasiin Nuur Ciise ayaa waxaa uu sheegay in bulshada degmadaas ay u tahay fursad qaali ah in isbitaalkaan weyn laga hirgaliyo degmada isagoo xusay in ay ka faa,iideysan doonaan. Wasiirka Caafimaadka Marwo Xaawo Xasan Maxamed ayaa gunaanadkii ka hadashay la wareegitaanka Isbitaalka waxaana ay sheegtay in wax aad loogu farxo ay tahay in isbitaalka sidaas u baaxad weyn laga hirgaliyo Soomaaliya, amaan iyo bogaadin ayayna u soo jeedisay Dowladda Bahrain oo dhaqaalaha lagu dhisay ku bixisay iyo Hay’adda Islamic Relief oo dhistay.
MASAR: Gabar Soomaali ah oo dhimatay markii ay dooni la cilladowday
Dhagayso Warka Subaxnimo 11.04.2015